» हवाई पूर्वाधारमा फड्को, के के भयो त काम ?
हवाई पूर्वाधारमा फड्को, के के भयो त काम ?
२०७७ फाल्गुन ४, मंगलवार १६:०८
पर्यटन मन्त्रीले पछिल्लोपटक इजरायलसँग सिधा हवाई उडान सञ्चालनबारे नेपालका लागि इजरायली राजदूतसँग छलफल गरेको थियो । हाल नेपालले विभिन्न ४० मुलुकसँग हवाई सेवा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । असहज परिस्थितिमा पनि हवाई पूर्वाधारले फड्को मारेको छ ।
सरकारले पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्रमा पनि नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतायुक्त क्षेत्रको रुपमा व्याख्या गरेको छ । नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा हाल पर्यटन क्षेत्रको तीन प्रतिशत योगदानलाई बढाएर १० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ ।
क्यानको २२औँ वार्षिक प्रगति विवरणमा आव २०७६÷७७ मा पूँजीगत खर्चतर्फ ३४ अर्ब चार करोड ३७ लाख र कार्यसञ्चालन खर्च आठ अर्ब १८ करोड ८४ लाख गरी जम्मा ३८ अर्ब २३ करोड ११ लाख व्यय अनुमान गरिएकामा पूँजीगत खर्च १५ अर्ब ४१ करोड २९ लाख छ । चालू आव २०७७÷७८ का लागि पूँजीगत खर्च तर्फ २८ अर्ब ९२ करोड २७ लाख तथा कार्य सञ्चालनतर्फ तीन अर्ब ६६ करोड गरी जम्मा ३२ अर्ब ५८ करोड ९३ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
विसं २०७२ को गोरखा (७‍.६ रेक्टर) भूकम्पपछि शिथिल बनेको नेपालको पर्यटन क्षेत्रले पछिल्ला वर्षमा गति लियो । विसं २०७४ संविधानसभाको निर्वाचनपछि स्थायी सरकार बन्यो । त्यसको सकारात्मक असर पर्यटन क्षेत्रमा देखिएको छ । पछिल्ला वर्षमा नेपालमा पर्यटकको आगमन बढेको छ ।